Imidlalo yaMantombazana yaBusuku boMtshato - Amaqela Amaqela
Imidlalo yaMantombazana yaBusuku boMtshato
Faka amantombazana emidlalo yepati yasebusuku kumanenekazi akho alandelayo ekuphumeni kunye nokwenza ezinye iinkumbulo ezimyoli nezihlekisayo eziza kuthandwa ziintombi zakho kwiminyaka ezayo. Imidlalo elula kwaye enokudlalwa naphi na apho uya khona ifanelekile. Nika enye okanye ezimbini, kwaye uqinisekile ukuba uza kubambeka!
Ngaba kuphosakele ukungayi emngcwabeni?
Khalisa Intsimbi Yam
Phrinta imibuzo ngeRing My Bell.
Thenga intsimbi engabizi kakhulu kwaye uyirholise ukuze ufumane ingqalelo yomntu wonke. Emva koko, buza uluhlu lwemibuzo, kwaye umntu wokuqala ukuphendula ngamnye ufumana inqaku. Nabani na onamanqaku amaninzi ekugqibeleni nguye ophumeleleyo. Unokunika wonke umntu obhinqileyo eyakhe intsimbi ukuze akwazi 'ukukhala' kwimpendulo yakhe, endaweni yokumemeza.
Iingcamango zeBonfire Night Party
Iingcamango zama-21 zeQela lokuzalwa
Izimvo zePati yoLutsha lokuZalwa
Printa uluhlu lwemibuzo ebonelelwe usebenzisa iAdobe kwaye ungeze eyakho! Ukuba ufuna uncedo lokukhuphela izinto eziprintiweyo, jonga eziiingcebiso eziluncedo.
Eminye imibuzo onokuyibuza ibandakanya:
eyona moto indala?
ulahlekelwe kwesona sisindo?
nditshatile ixesha elide?
Nguba ni u...
endala? (Cela lo kuphela ngesihlwele esingayi kukhubeka!)
unxibe obomvu (okanye mnyama, pinki, luhlaza, njl.)?
intsha kakhulu edolophini?
Lungiselela lo mdlalo ngaphambi kokuba amantombazana ahlangane ngokuprinta uluhlu lwemibuzo yeRing My Bell, okanye wenze eyakho ngokusekwe kumava akho nabahlobo bakho nakwinto ocinga ukuba baya kuyifumana ihlekisa.
Ukuba ulala namantombazana kufutshane neholide, unokupheka ikuki. Oku kunokwenziwa ngeendlela ezimbini. Okokuqala, umntu ngamnye oza kubakho unokubhaka ii-cookies zakhe azithandayo ekhaya, emva koko azise ipleyiti yeicookie emthendelekweni. Njengeqela, unokuba nakho ukhuphiswano lovavanyo lokungcamla ukuze uthathe isigqibo sokuba ngubani ophethe ngokupheleleyoEyona ndlela ilungileyo yecookie.
Unokuthenga inhlama engaphambi kwexesha okanye ubhake iqela lecookie ezingenaswekile ngaphambi kwexesha, emva koko ube nomncintiswano wokuhombisa. Yahlula iindwendwe zakho ngokwamaqela kwaye ubonelele ngezinto ezininzi zokuhombisa. Ixesha lamaqela kwaye ubone ukuba ngubani onokuhombisa eyona bhetshi ilungileyo kwimizuzu emihlanu. Elona candelo lilungileyo lalo mdlalo? Umvuzo kukuba uza kutya ii cookies!
I-Purse Treasure Hunt
Umntu omnye kufuneka enze njengomphathi womdlalo. Yenza uluhlu lwezinto eziqhelekileyo onokuzifumana kwisipaji somfazi. Oku kunokubandakanya izinto ezinje:
Iingqekembe zemali ezithile
Umntu obamba umdlalo uya kubiza into ibe nye ngexesha. Umfazi wokuqala ukuvelisa loo nto kwisipaji sakhe unikwa inqaku elinye. Nabani na oya kuvuthuza kunye namanqaku amaninzi ekupheleni komdlalo. Thatha isigqibo ngohlobo oluthile lomvuzo ophumeleleyo ngaphambi kwexesha.
umfazi ongumfazi kunye ne-taurus ukuhambelana kwendoda
Ukudlala 'Andizange' yenye into endiyithandayo. Abanye abantu basetyhini banokufumana indalo entle ngalo mdlalo, ke lumka ukuba utywala buyabandakanyeka. Umdlalo uhlala udlalwa nomntu omnye esithi 'andizange' kwaye ndiwulandele ngengxelo. Umzekelo, 'Andikhawulezisi kuhola wendlela xa ndisiya emsebenzini.' Wonke umntu unayo wenze into ekhankanyiweyo yile ngxelo, kufuneka usele. Ngohlobo olungelolotywala, wonke umntu owenze le ngxelo kufuneka aphakame kwaye enze iHokey-Pokey njengoko bejika. Ukuzola okuncinci kwenza umdlalo wonwabe ngakumbi.
Funda izinto ongazange wazi malunga nabahlobo bakho ngaphambili! Konke okudingayo yiphedi encinci yokubhala kunye nezixhobo zokubhala.
Nika iigal pals nganye iphepha, uze ubacele ukuba babhale into malunga nabo okanye into abayenzileyo ekungekho mntu waziyo ngayo. Umzekelo, omnye umhlobo wayenokuba nesilwanyana esingaqhelekanga njengentombazana encinci, okanye omnye unokuba nophawu lokuzalwa kwindawo engaqhelekanga. Unokuba njengobungozi okanye ukuthamba ngendlela othanda ngayo ngezi nyaniso.
Ngaba mabasonge amanqaku abo kwaye bawafake kwisitya esingenanto okanye iglasi.
Tshintshanani ngokuzoba inowuthi enye ngexesha, niyifundele iqela, kwaye wonke umntu aqikelele ukuba ngowuphi umhlobo obhale inqaku.
Dlala nje ngokuzonwabisa, okanye unike inqaku umntu wokuqala oqikelela ngokuchanekileyo. Umntu onamanqaku amaninzi angazuza ibhaso elikhethekileyo, njenge-cocktail yasimahla okanye idessert yasimahla ethi ithengwe liqela lonke.
Lo mdlalo udlalwa kakuhle ngexesha lobusuku bamantombazana epatini. Cela wonke umntu ukuba eze nezinto zokunxiba kunye nezixhobo ezifanelekileyo zobukumkanikazi obuhle, ukusuka kwii-glittery tiaras ukuya kwisinxibo sobucwebecwebe, ii-boas zeentsiba, okanye nditsho iilokhwe zepati kunye nezihlangu. Beka zonke izinto kwingxowa enkulu yenkunkuma okanye kwibhasikithi yokuhlamba iimpahla. Umdlalo ngokwawo udlalwa ngendlela efanayo nezitulo zomculo. Hlala kwisangqa kwaye uqale umculo okanye ubeke iDVD ukuze uyidlale kwaye uqalise ukuhambisa ibhegi ejikeleze isangqa. Xa umculo okanye imovie iyeka, umntu ophethe ibhegi kufuneka athathe into ayinxibe.
Qhubeka ngolu hlobo, ngaphandle kokususa nabani na kwisangqa, de kube zonke iimpahla kunye nezinto zokunxiba zinxityiwe. Emva koko qiniseka ukuthatha imifanekiso embalwa yakho kunye nabahlobo bakho abahle bobuhle bendlovukazi! Ukuba ungathanda ukuphumelela isithsaba somdlalo ophumeleleyo kulo mdlalo, khetha umntu onxibe ezona zinto zimbalwa okanye zimbalwa, okanye lowo ujongeka elungele isihloko sobukumkanikazi obuhle.
Zimbini iindlela zokudlala 'Ndingubani?' Bobabini baqala nomntu obhala amagama abantu abadumileyo kumanqaku e-Post-It, bebhala amagama kwicala elingancangathiyo kwaye benze ngokwaneleyo ukuze umntu ngamnye akwazi ukuzoba elinye. Khetha abantu abadumileyo abaziwa ngeendlela zabo kunye nesimbo sabo, okanye abo kulula kwaye kumnandi ukulinganisa. Songa amanqaku ancangathi kubini, ubeke amagama kwisitya kwaye wonke umntu azobe elinye, ulumke ukuba amanqaku angabambeki onke.
Kwindlela yokuqala oza kuyidlala, qiniseka ukuba wena nabahlobo bakho anijongi igama enilikhethileyo. Vula amanqaku ngaphandle kokujonga, kwaye wonke umntu abambelele kwiPost-Its ebunzi. Ngale ndlela abanye banokufunda amagama, kodwa akukho mntu unokubona eyakhe. Tshintshana ngokubuza imibuzo malunga nokuba ingaba ngubani umntu wakho odumileyo, usebenzisa imibuzo enokuphendulwa ngo-ewe okanye u-hayi. Umntu wokuqala ukuqikelela ukuba ngubani ophumelele umdlalo.
Ukuthatha omnye kulo mdlalo, ungasebenzisa iphepha elicacileyo endaweni yamanqaku anamathele amagama. Yenza ukuba umntu ngamnye azobe indumasi kwaye ajonge igama. Emva koko, ngalo lonke ixesha langokuhlwa, zama ukwenza njengosaziwayo omkhethileyo amaxesha ngamaxesha. Phonsa isicatshulwa somdlalo bhanyabhanya ukuba inokuba ithe inkwenkwezi, funda amazwi asuka kosaziwayo bomculo, okanye uzame ukulinganisa isitayile sokutyikitya kwenkwenkwezi okanye ii-quirks. Xa umntu eqikelela ngokuchanekileyo ukuba ungubani, nikezela inqaku lakho kunye negama lodumo kulo. Ekupheleni kokuhlwa umntu onamanqaku amaninzi uwina umdlalo.
Njengokuba 'Andizange,' lo mdlalo unokukhawuleza ngokukhawuleza. Dlala kuphela umjikelo omnye ngaphandle kokuba wonke umntu ucwangcisa ukuchitha ubusuku, okanye ukhethe uhlobo olungelulo utywala, olunokuba lolonwaba kakhulu.
ukuba ungathetha ngantoni ngaphezulu kombhalo
Ukuseta umdlalo, beka ulwelo olwahlukeneyo, ukusukautywala kwijusi nangaphezulu. Beka ezi ndawo kwindawo apho abantu banokuxuba umxube ngaphandle komntu ombonayo, njengekona yekhitshi. Khetha izinto ezimbalwa eziqhelekileyo ezixutywe nezinye ezingaqhelekanga, ezinje:
Uyakufuna ukuba neekomityi ezincinci okanye iiglasi zewayini zeplastiki kunye neepuni ezincinci okanye ugxobhoze iintonga.
Ukudlala umdlalo, umntu wokuqala uya 'kwi-bar' kwaye enze i-cocktail eyenziwe ngezinto ezimbini okanye ezintathu ezahlukeneyo. Emva koko uzisa i-cocktail kuye kwaye wonke umntu ufumana isiselo. Umntu wokuqala ukuqikelela ngokuchanekileyo izithako ufumana inqaku. Ukuba akukho mntu uqikelela ngokuchanekileyo, umenzi wecocktail ufumana inqaku lala mjikelo. Qhubeka udlale de wonke umntu abe nethuba lokwenza i-cocktail. Ekupheleni komdlalo, umntu onamanqaku amaninzi uyaphumelela. Unokunika ibhaso elihle ngalo mdlalo, njenge-cocktail shaker, okanye uhambe nento ehlekisayo, njengebhotile ye-Aspirin.
Umthombo weTheyibhile yoBuchule boLutsha
Mamela kwiintsuku apho ubunokuhlala khona neetafile zakho kwitafile yezobugcisa esikolweni, usasaza ubukhazikhazi kumakhadi emibuliso eyenziwe ngezandla kunye nokuncamathelisa amagwebu egwebu kwiikholaji. Cwangcisa itafile yakho kunye nezinto oza kuzidinga ukwenza ulutsha, iiprojekthi zobugcisa ezilula. Izimvo ezingezantsi zisebenzisa izinto ezilula kwaye ziyakhawuleza ukuzenza, kodwa zive ukhululekile ukufaka ezakho izinto ozithandayo.
Izacholo ze-Starburst Candy Wrapper
Hlanganisa ii-candy zakho ezisongelayo kwaye wenze iisongo ezihambelanayo eziza kukuthega kwangoko njengezihlobo ezilungileyo! Uzakufuna ii-wrappers ezingama-36 nganye, kunye nezikhonkwane ezaneleyo zokukhusela wonke umntu ukuzigcina ezihlahleni zakho.
Isikhangeli sakho asiyixhasi ithegi yevidiyo.
Fumana elona phepha linemibala eqaqambileyo, elibengezelayo, elinepateni onokuyenza kwaye usonge amanye amaphepha ephepha ukutshatisa iimpahla zakho zamantombazana ebusuku Kukho iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzokwesi sifundo. Thatha i-glitter glitter kunye ne-sticky stickers ukuze wenze abalandeli bakho nangakumbi.
Umbhobho oCoca iintyatyambo
Uyakhumbula ukudlala ngezicoci zombhobho? Unokwenza zonke iintlobo zezinto ezipholileyo kunye nabo! Thatha izinto zokucoca umbhobho kuzo zonke iintlobo zemibala kwaye uzigobe zibe ziintyatyambo. Unokwenza i-bouquet ukubhiyozela undwendwe lwembeko, okanye wenze nje isikhumbuzo sobusuku obukhulu ngaphandle. Imiyalelo yokwenza iintyatyambo- kunye neepopu zeminwe, izigcawu, kunye nezinye izinto-ngaphandleabacoci bombhobho.
Phila ukuDibana kwakho
Ubusuku bamantombazana bunakozibandakanya iziselokunye / okanye isidlo sangokuhlwa edolophini, okanye ubusuku obuzolileyo buphethe ukutya okumnandi kunye nenkukhu oyithandayo oyithandayo kwiDVD player. Nokuba ungaya phi, umdlalo omnandi okanye emibini inokubonwabisa ngokuhlwa kwakho. Ukuzonwabisa kunokukunceda wena kunye nabahlobo bakho ukuba nisondelelane, kwaye banokunceda abantu abatsha ukuba baphule i-ice kwaye bazi amanye amalungu esangqa sakho sentlalo ngokulula.
Iitattoo Izixhobo E Izixhobo Impilo Ne Ubuhle Iinkonzo Zematriki Citizen Services Addiction And Recovery Interviews Ukuhamba Tips
indlela yokunxiba njenge-nerd
Ucoceka njani isipaji somqeqeshi welaphu
Indawo efanelekileyo yokuthenga amatye anqabileyo
indlela yokwenza ukuba amantombazana akuthande
Kutheni isiqwenga sephazili luphawu lwe-autism
iikati zopha ngexa lazo